Banyere Anyị - Kingsine Electric akpaaka Co., Ltd.
Kingsine Electric Automation Co., Ltd. bụ ọkachamara na nyocha & mmepe, mmepụta na ire ahịa nke nnwale eletriki eletriki na igwe eji eme ihe kemgbe 1999 ntọala bụ onye a na-asọpụrụ dị ka asambodo ụlọ ọrụ teknụzụ na teknụzụ nke teknụzụ nke ndị ikike China nyere. N'ihe dị ka nnukwu mmepe ngwa ngwa kwa afọ, Kingsine meriri onye isi ụlọ ọrụ China maka ngwa elektrik na ụlọ ahịa na-anwale ụlọ.
Nnyocha & mmepe:
Kingsine nwekwara ndị ọkachamara na ndị ọkachamara siri ike ma nwee ike ịnye ihe nyocha eletriki eletriki kwekọrọ na nkọwa ndị ahịa, site na echiche imepụta All-in-One na ọtụtụ ikike nchọpụta, ụlọ ọrụ ndị mba China kwadoro nke ọma ma kwado ya. Metrology na ike nnyocha institutes nke ọ bụla mpaghara yana CE akwụkwọ.
Na ISO 9001: 2000 gbaara ma chọkwa mpaghara mpaghara teknụzụ dị elu nke obodo agbata obi Shenzhen Hong Kong, Kingsine na-ejikọ usoro nhazi niile yana usoro nrụpụta na-aga n'ihu na nchekwa Relay Test Set, Power Power, Calibrator Power, RTU-Tester & Multifunctional Power Meter , nke na-eme ka ngwaahịa ya nwee akwụkwọ ikike nke afọ 3 na nrụzi n'efu.
Ahịa & Ọrụ:
Ihe karịrị mba 70 ugbu a nabatara ngwaahịa ndị Kingsine n'ụwa niile n'ọtụtụ ụlọ ọrụ nke ike eletriki, nka ọrụ, mmanụ, kemịkalụ, okporo ụzọ ụgbọ oloko na ụlọ ọrụ nyocha sayensị metụtara yana otu ahịa nke mita na ụlọ ọrụ mgbapụta na-echekwa, na ịnweta nnabata ọkụ si mba ụwa nnukwu ọkụ eletrik. & Ike Ngosi dị ka
POWER-GEN International nke USA, Middle East Electricity nke Dubai, HANNOVER MESSE nke Germany na FIEE Electrical nke Brazil. Relay-Tester adabara na-arụ ọrụ maka ọtụtụ ụwa ama ọsọ agba anọ nchedo ngwaọrụ dịka ABB, SIMENS, ALSTOM, TOSHIBA, SCHNEIDER, AREVA, SEL, GE wdg na Kingsine na-enyekwa ọrụ zuru oke yana ụgbụ nkesa ya sitere n'ọtụtụ mba ndị mmekọ Europe, Asia na Middle East.
Nọgide na nkwenkwe Ọhụrụ na Teknụzụ na Nkọwapụta na Ọrụ, jiri nwayọ setịpụ ọrụ ụwa na ahịa ahịa yana ndị mmekọ na nkesa ụwa niile, Kingsine agaghị aga n'ihu na-agbasi mbọ ike ijere ndị ahịa n'ụwa niile ozi na teknụzụ ọhụụ, ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya na ogo. ọrụ, ma mee ka ụwa Nnwale Ule dị mfe.
Esi esi agba anọ Tester, Relay Test, Nchekwa ọsọ agba anọ Tester, Nyocha nke Digital, Anya Nchekwa ọsọ agba anọ Tester, Ọgụgụ ọsọ agba anọ Tester, Ngwa niile